Wasiirka Kalluumeysiga XFS oo la kulmay iskaashatooyinka Kulluumeysatada Soomaaliyeed – Walaal24 Newss
Wasiirka Kaluumeysiga iyo Khayraadka Badda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Bidhaan Warsame ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay xubno ka socday ururada Iskaashatooyinka Kaluumeysatada Soomaaliyeed, iyagoo ka wada hadlya sidii loo xoojin lahaa wadashaqeyn dhexmarta Wasaaradda iyo Kaluumeysatada.
Kulanka oo muddo saacado ah qaatay ayaa Wasiirka Cabdullaahi Bidhaan Warsame iyo guddoomiyaasha Ururada Iskaashatooyinka Soomaaliyeed, waxaa ay xooga saareen arrimo ay kamid yihiin diwaangelinta doomanka kaluumeysi, Kalluumeysatada iyo habka bixinta ruqsadaha kalluumeysi oo ay bixiso Wasaaradda.
Sidoo kale waxaa la isla gartay in Wasaaradda Kalluumeysiga dowladda Soomaaliya ay sameyso suuq geyn dibadd aah kaluunka dalka iyo in la abuuro hab cusub oo lagu uruurinayo laguna keydinaya xogaha arrimahaasi la xiriira.
Mudane Cabdullaahi Bidhaan Warsame Wasiirka Kaluumeysiga iyo Khayraadka Badda Dowladda Soomaaliya ayaa balanqaaday in suuqa ugu weyn ee Kalluunka Soomaaliya laga furayo Muqdisho, gaar ahaan Xamarweyne.
Ugu dambeyntii wuxuu ku booriyay Kaluumeysatada in ay ilaaliyaan oo ay ka taxdiraan tayada iyo nadaafadda Kalluunka ay iibinayaan si loo ilaaliyo caafimaadka bulshada, maadaama ay cabashooyin ka imaanayaan xiliyada qaar.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo soo xiray kulanka shir-weynaha Culimada Soomaaliyeed